अबको ६ महिनाभित्र नेपालमा को-रोना संक्रमणको झन ठूलो जोखिम हुन सक्ने, विज्ञहरुले दिए यस्तो ड-रलाग्दो सङ्केत – Sapana Sanjal
अबको ६ महिनाभित्र नेपालमा को-रोना संक्रमणको झन ठूलो जोखिम हुन सक्ने, विज्ञहरुले दिए यस्तो ड-रलाग्दो सङ्केत
Sapana Sanjal : काठमाडौं, । अबको चारदेखि ६ महिनाभित्र सबै उमेर समूह तेस्रो लहरको को-रोना संक्रमणको जोखिममा रहेको विज्ञले औंल्याएका छन्। नेपालमा अहिले पनि करिब ८ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र खोप लिएका र बाँकीका बारेमा अन्योल रहेको अवस्थामा खोप नलिएका उमेर समूह जोखिममा पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
विकसित राष्ट्रहरूले तेस्रो लहरको जोखिममा खोप नलिएका १८ वर्षमुनिका बालबालिका पर्ने प्रक्षेपण गरिरहेकै बेला नेपालका स्वास्थ्य विज्ञको भने भिन्न धारणा छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा पवित्रा सुनारले लेखेकी छन्।
‘हामी कहाँ विकसित राष्ट्रकै सूत्र लागु हुने स्थिति छैन, अमेरिका तथा युरोपमा खो-प लगाउन बालबालिकामात्र बाँकी रहेकाले तेस्रो लहरको जोखिममा उनीहरूलाई राखेका हुन्। हामी कहाँ खोप नलिएका सबै जोखिममा पर्छन्’, राष्ट्रिय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनीले भने।
नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिका र खोप नलिएका कुनै पनि समूह जोखिममा हुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान विभाग संयोजक डा.शेरबहादुर पुन बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा सन् २०२१ भित्रै सबै उमेर समूहले खोप लगाइसक्ने सम्भावना नदेखिएकाले बालबालिकासमेत जोखिममा छन्।
खो-प नलिएका युवा र बालबालिका दुवै जोखिममा पर्न सक्ने डा.पुनको अनुमान छ। भाइरस कुन रूपमा म्युटेन्ट भएर आउँछ भन्ने कुराले पनि जोखिम निर्धारण हुने उनको भनाइ छ। अहिले खोप लिएकामा पनि खोपले कति महिना काम गर्छ भन्ने कुराको अध्ययन भइनसकेको अवस्थामा कुनै उमेर समूहमात्र जोखिममा भन्ने निक्र्योल गर्न नसकिने पुनले बताए।
कोभिड १९ विरुद्धको खोप संयोजक डा. श्यामराज उपे्रतीले अहिलेसम्म खोप आउने निश्चित नभएकाले नेपालमा बालबालिकाका साथै खोप नलिएका सबै समूह जोखिममा रहेको बताए। पहिलो र दोस्रो लहरमा पनि नेपालमा बालबालिका संक्रमित भइसकेका छन् तर उनीहरूको मृत्युदर कम देखिएको छ। बालबालिका होचा हुने, भुइँमा खेल्ने कारणले घरको सफाइमा ध्यान दिने, घरबाहिरका व्यक्तिलाई बालबालिकासँग भेट्न नदिन सजग हुनुपर्ने चिकित्सक सुझाउँछन्।
Prevफेरी पीडित राउटे युवतीलाई सदरमुकाममा लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै, अब के होला ? (भिडियो हेर्नुस्)
Nextउपचार पाएपछि निशाको अनुहारमा देखिन थाल्यो छुट्टै चमक